Beddelka loo adeegsado QGIS mobiladaha Android & IOS
QGIS waxay u istaagtay inay tahay aaladda furitaanka ee ugu dhaqsaha badan istiraatiijiyadda istiraatiijiyadeed ee isticmaalka geospatial. Waxaan ku faraxsanahay inaan ogaano in noocyada QGIS ee aaladaha mobilada ay horeyba u jireen. Isticmaalka jibbaarka badan ee codsiyada moobiilka ayaa ka dhigaya qalabka desktop-ka inay doortaan inay horumariyaan noocyo loo adeegsado taleefannada ama kiniinnada. The…
Featured, Geospatial - GIS, qgis
Bentley: codsiyada Mobile iyo dadka isticmaala-ma DGN-
Jiritaanka meeleynta shirkadaha bixiya qalabka loogu talagalay Geo-injineernimada ay ku heleen hal-abuurnimadooda iyo la-qabsiga hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda. Meelayntu aad ayey u calaamadeysan tahay, habka ay u iibinayaan takhasuskooda wada xiriirka shirkadaha, in kasta oo xaqiiqda ah in maalin kasta farqiga u dhexeeya anshaxyadu uu sii adkaanayo in ...
Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Microstation-Bentley
MundoGEO, oo ah shirkadda ugu wakiilka badan geospatial-ka aagga isgaarsiinta Latin Amerika, ayaa bilawday laba codsi si majaladda MundoGEO looga daawan karo aaladaha mobilada, labadaasna ay wataan Apple iyo iOS. Sannadkan uun, joornaalkan ayaa isku milmay waxyaabaha ku jira joornaalada InfoGEO iyo InfoGNSS, intaa waxaa sii dheer oo ay ku jirtay ...
Abuur barnaamijkeena taleefanka gacanta
Kalluumeysiga ayaa suurtogal ah inuu yahay mid ka mid ah xalka ugu fiican ee halkaas ka jira si loo dhiso codsiyada moobiilka. Dabacsanaanta ay haysato, oo lagu daray tirada barnaamijyada la taageerayo waxay ka tarjumaysaa shaqo aan caadi aheyn oo abuurayaasheeda ah oo aad ku qaadan kartid baloog, RSSs quudinta ama waxyaabaha ku saabsan warbaahinta bulshada codsiyada diyaar u ah in lagu qaybiyo dukaamada ...
tabo cusub, Internet iyo Blogs, egeomates My
XPERIA mini X10, kulankiisii ​​koowaad ee Android
Qorshaha Geofumadas ee sanadka 2012 waa tijaabinta barnaamijyada Android, iyadoo la tixgelinayo inay tahay isbeddel aan laga soo kaban karin. Waxaan ka warqabnaa in Apple ay had iyo jeer si fiican u taagnaan doonto heerka moobiilka laakiin ay ka duwan tahay wax kasta oo ku gadaaman meertada Apple ee xiran, Android waxay yeelan doontaa koritaan lama huraan ah. Sidaas…
Android ipad My aragti ugu horeysay
GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay